Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, pamwe nevamwe vatungamiri venyika dzemuSADC vanonzi vawirirana kuti dunhu reSADC ritumire mauto aro kudunhu reCabo Delgado, kuMozambique uko kuri kurwiswa nevanopfurikidza mwero.
Musangano wanhasi unonzi watambira kurudziro yeSADC Troika yekuti mauto eSADC Standby Force ashandiswe kubatsira Mozambique kurwisa nevanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado.
Mumashoko avo mushure memusangano wanhasi, munyori weSADC, Amai Stergomena Lawrence Tax, havana kutaura kuti masoja mangani achange ari muchikwata ichi uye kuti achapinda muMozambique riini.
Musangano wanhasi unotevera mumwe wakaitwa neSADC Troika mwedzi wapfuura uyo wakatambira gwaro rakaturwa nechikwata chakatumwa kuCabo Delgado icho chakati mauto eSADC anofanira kupindira mudunhu iri uko vanopfurikidza mwero vari kurwisa hurumende neveruzhinji.
Masangano anoshanda akazvimirira anoti vatungamiriri veSADC vanofanira kugadzirisa nyaya iyi kwete kuramba vachingoita misangano isina zvainobatsira vanhu vekuCabo Delgado.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDewa Mavhinga, vaudza Studio 7 kuti vatungamiriri veSADC havafaniri kuramba vakapeta maoko dambudziko richienderera mberi.
Izvi zvatsigirwa nemutauriri weCrisin in Zimbabwe Coaltion, VaMarvelous Khumalo, avo vati dambudziko iri rinogona kupararira nedunhu rese kana rikasagadziriswa nekukasika.
VaKhumalo vati musangano wanhasi unofanira kubuda nechisungo chinopedza dambudziko iri.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira, Dr Wellington Gadzikwa, vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nevatungamiriri veSADC kutora nguva kugadzirisa dambudziko iri zvinoita kuti veruzhinji vaone sekuti vatungamiriri ava havana simba.
Vati kuita kwakadai ndiko kunoita kuti vekunze kwedunhu iri nenyika dzemhiri kwemakungwa vapindire.
Pari zvino nyika dzakaita seUnited States, France nePortugal dzave kutobatsira Mozambique pahondo yekuCabo Delgado.
Imwe nyaya iri kuzeiwa kuMaputo inyaya yekuti nyika dzeSADC dzingasimbaradze sei hukamana hwadzo pamwe nekuti dzingabatsirane sei panguva yematambudziko.
Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reMDC Alliance, VaClifford Hlatywayo, vaudza Studio7 kuti SADC inofanira kupindira nechimbi chimbi kana pachinge paita dambudziko seriri kuCabo Delgado.
Mahofisi eUnited Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs kana kuti OCHA anoti nhondo yemuCabo Delgado yaita kuti nzvimbo ive imwe yenzvimbo ine vanhu vakawandisa vari kutia misha yavo pasi rese.
United Nations inoti kusvika muna Kubvumbi gore rino, vanhu zviuru mazana manomwe nemakumi matutu nezviviri (732 000) vainge vatiza misha yavo nekuda kwehondo uye vari kuyaura nenzara nenhamo.
Chisungo chanhasi chinouya mushure memisangano yakawanda yakaitwa nevatungamiriri veSADC kubva pakatanga hondo yekuCabo Delgado muna 2017